Beautyhealthcare – Page3– My Doctor
Beautyhealthcare	admin2	2018-04-19T14:32:48+00:00
DrMay ThantSyn	2019-02-06T08:43:29+00:00
“ မညီမညာ ပြသနာ “ အသားညိုသူတွေက ဖြူချင်ကြတယ်…..ဖြူသူတွေက ညိုချင်ကြတယ်….. အသားမညီသူတွေက အသားအရောင်လေးတပြေးတည်း ညီချင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အသားအရေ မညီညာခြင်းကလည်း ပြသနာတစ်ရပ်ပင်။ အသားဖြူဖြူ ညိုညို …..အနည်းဆုံးတော့ ခန္ဓာကိုယ်အသားအရောင်လေးညီနေရင် ဘာပြောပြောကြည့်လို့ အဆင်ပြေသည်။အသားမညီတဲ့အခါကျ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ …..ဝတ်ရစားရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှ။
DrMay ThantSyn	2019-01-23T08:26:09+00:00
မျက်​ရစ်​​ဖော်​ခြင်း , မျက်​အိတ်​ထုတ်​ခြင်း ကုသမှု ဆရာမတို့ရဲ့ အလှအပ​ရေးရာ ​ဆေးပညာ ​တစ်​​နေ့ထက်​တစ်​​နေ့ တိုးတက်​ထွန်းကားလာတာနဲ့ အမျှ လူတို့ရဲ့မျက်​နှာ ပုံပန်းသွင်​ပြင်​ကို​ ပိုပြီးကြည့်​​ကောင်း​အောင်​ ကုသလို့ရတဲ့ နည်းလမ်း​တွေ အများကြီး​ရှိ​နေပြီပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ အဲ့လိုပြုပြင်​မှု​တွေထဲကမှ အခုတစ်​​​ခေါက်​မှာ​တော့ မျက်​ရစ်​ခွဲစိတ်​မှုအ​ကြောင်း​လေးကို ဆရာမ ​ပြောပြ​ပေးချင်​ပါတယ်​ ဆရာမတို့
DrMay ThantSyn	2019-01-18T15:57:34+00:00
ဟင်းနုနယ်၏ ကောင်းကျိုးများ Spinach ခေါ် ဟင်းနုနယ်ဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပေါက်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပြီး အရွက် ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် အနေနဲ့ စားသုံးကြပါတယ်။ အစိမ်းဖြစ်စေ၊ ကြော်ချက်၍ ဖြစ်စေ၊ Juice လုပ်သောက်တာ ဖြစ်စေ၊ အအေးခံပြီး Canned လုပ်တာဖြစ်စေ နည်းမျိုးစုံး
DrMay ThantSyn	2019-01-14T12:00:20+00:00
ကလေးနှင့် ပျားရည် ပျားရည်ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝ အစားအစာဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်သင့်တော်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ သဘာဝက ရတဲ့ အချိုဓာတ်အပြင် တခြား အာဟာရဓာတ်တွေပါ ပါဝင်နေတာကြောင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး သုံးစွဲကြပါတယ်။ ပျားရည်ကို ဒီတိုင်းစားကြတဲ့ အပြင်၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ ရောသောက်တာ၊ မုန်
DrMay ThantSyn	2018-12-29T23:15:11+00:00
ဂျိုင်းကြားအသားအ​ရေ ညိုမည်းခြင်းကို ဘယ်​လိုကုသမလဲ အလှအပကိုအ​လေးထားတဲ့ ​အခုလိုအချိန်​မှာ ပြစ်​မျိုးမှဲ့ မထင်​​အောင်​ လှပဖို့ ကုသမှု​တွေ ခံယူလို့ရ​နေပါပြီ​နော်​ အဲ့ဒီအထဲမှာမှ ဂျိုင်းကြားအသားအ​ရေ ညိုမည်းခြင်းကို ဘယ်​လိုကုသမှု​တွေနဲ့ ကုသလို့ရို့ရလဲဆိုတာ ​ပြောပြ​ပေးချင်​ပါတယ်​ လူအ​ယောက်​ ၁၀၀ မှာ ၅၀ ​လောက်​က ဂျိုင်းကြား အသားအ​​ရေ
DrMay ThantSyn	2019-03-04T16:19:32+00:00
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းခြင်း အခုတစ်ခေါက်ဆောင်းပါးမှာတော့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့ အမျှ အမျိုးသမီးတွေ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၃၀ ကျော်လာတာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုလေးတွေနဲ့ စတင်ကြုံလာရပါတယ် အဲ့ဒီ လက္ခဏာလေးတွေကတော့- 1)နှဖူးအရေးအကြောင်းများပေါ်လာခြင်း 2)မျက်မှောင်ကျုံ့တဲ့ နေရာ
Hot bath or cold bath in Winter
DrMay ThantSyn	2018-12-17T09:26:14+00:00
ဆောင်းရာသီမှာ ရေအေးနဲ့ချိုးကြမလား? ရေနွေးနဲ့ချိုးကြမလား? ဆောင်းဝင်နေပြီဆိုတော့.....ဒီအကြောင်းအရာလေးကို လူအတော်များများ စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သိတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်ဆောင်းက နေ့ခင်းဘက်တွေ ပူသလိုရှိပေမယ့်လို့....အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ရေချိုးချိန်ဖြစ်တဲ့ မနက်အစောပိုင်းနဲ့ ညနေ/ညပိုင်းတွေတော့ အချမ်းပိုလှပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးပြောလိုတာကတော့ ဒီနေရာမှာ သုံးနှုန်းတဲ့ "ရေအေး" ဆိုတာ....ပုံမှန်ချိုးနေကြရေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး......"ရေနွေး"ဆိုတာကတော့ .....ခပ်နွေးနွေးရေကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။(ရေအေးကို ရေခဲရေ၊ ရေနွေးကို အလွန်ပူတဲ့ရေနွေးလို့
DrMay ThantSyn	2018-12-15T17:41:49+00:00
ငါးကြီးဆီ Fish oil ကတော့ လူတော်တော်များများ ကြားဖူးသိဖူးကြမှာပါ .. တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဟိုးအရင်ခေတ်တွေထဲက ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လို့စားခဲ့ကြတာပါ ... ရှေးမြန်မာကြီးတွေလက်ထက်ကတည်းက စားသုံးခဲ့ကြတဲ့ ငါးကြီးဆီပါပဲ ... အဲ့ဒီခေတ်တွေတုံးကတော့ နည်းပညာမတိုးတက်သေးတော့ အနံ့နံပါတယ် ... ခေတ်တွေတိုးတက်တာနဲ့အမျှ စားသုံးရလွယ်ကူအောင်ထုတ်လာကြတာပေါ့နော် 😀
DrMay ThantSyn	2018-12-01T11:50:12+00:00
ဝက်​ခြံနဲ့ ဝက်​ခြံ​ကြောင့်​ကျန်​ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်​​တွေဟာ ဝက်​ခြံနဲ့ ဝက်​ခြံ​ကြောင့်​ကျန်​ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်​​တွေဟာ အလှအပကြိုက်​နှစ်​သက်​​သူ​​တွေ အတွက်​​တော့ အိမ်​မက်​ဆိုးတစ်​ခုပါ။ ဝက်​ခြံက အသားအ​ရေအလှကို ညှိုးနွမ်း​စေသလို နီမြန်းခြင်း​တွေ၊ အမာရွတ်​ကျန်​ခြင်း​တွေကိုလည်း ဖြစ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​။ ဝက်​ခြံဆိုးဆိုးရွားရွား ထွက်​ခဲ့တဲ့သူ​တွေ၊ ဝက်​ခြံဖုကို မသန့်​ရှင်းတဲ့ လက်​​တွေ၊ ဝက်​ခြံညှစ်​တံ​တွေနဲ့. ထိုးဆွတဲ့သူ​တွေမှာ အမာရွတ်​​တွေကျန်​ခဲ့နိုင်​ပါတယ်​။
Effect of Honey and Lime juice on your belly
DrMay ThantSyn	2018-11-28T11:08:08+00:00
ပျားရည်သံပုရာက တကယ်ပဲ ဗိုက်ချပ်စေသလား? ပျားရည်သံပုရာနဲ့ ဗိုက်ချပ်အောင်လုပ်တဲ့နည်း ၀ိတ်ချတဲ့နည်း ကတော့ မိန်းကလေးတွေကြားမှာ တော်တော် ရေပန်းစားတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေး သဘာဝ အတိုင်း အသက်လေး နည်းနည်းကြီးလားလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ အစားလေး နည်းနည်းများများ စားမိရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာ